हल्लाको पछि दगुर्छन् लगानीकर्ता | गृहपृष्ठ
As of 2018-05-24 12:07:48
ADBL 335 (14) (1)
API 330 (108) (6)
BOKL 326 (414) (1)
BPCL 471 (520) (-4)
CBBL 1000 (50) (0)
CBL 166 (6918) (2)
CCBL 186 (608) (1)
CHL 147 (40) (1)
CIT 2725 (66) (25)
CLBSL 815 (57) (1)
CORBL 114 (40) (0)
CZBIL 263 (1719) (0)
DDBL 856 (300) (16)
DHPL 115 (10) (0)
EBL 734 (481) (6)
FMDBL 606 (326) (8)
FOWAD 2505 (420) (27)
GBBL 191 (5000) (-2)
GBIME 308 (426) (0)
GBLBS 631 (280) (-10)
GDBL 205 (400) (0)
HBL 606 (1562) (0)
HIDCL 161 (309) (-3)
HPPL 328 (40) (4)
JBBL 147 (130) (0)
JBNL 166 (2157) (1)
JEFL 112 (10) (2)
JSLBB 3335 (100) (-40)
KBL 238 (369) (0)
KEBL 266 (97) (-4)
KKHC 115 (68) (-2)
KMCDB 1565 (3671) (-40)
KMFL 1953 (236) (73)
KSBBL 168 (50) (2)
LBBL 159 (112) (0)
LBL 280 (255) (-3)
LLBS 1270 (98) (-10)
MBL 227 (1155) (-2)
MERO 1218 (370) (-11)
MLBBL 1180 (448) (3)
MMFDB 3148 (162) (58)
MNBBL 406 (96) (-1)
MSLB 2939 (27) (-1)
MSMBS 805 (177) (-4)
NABIL 999 (614) (12)
NBB 225 (2302) (-1)
NBBL 2785 (251) (-46)
NBL 345 (300) (-2)
NCCB 270 (9) (0)
NGPL 197 (44) (-1)
NHDL 173 (10) (-2)
NHPC 89 (180) (-1)
NIB 650 (2629) (2)
NICA 336 (806) (0)
NICL 705 (190) (5)
NIL 610 (110) (6)
NLBBL 755 (410) (-4)
NLIC 1155 (528) (9)
NLICL 1405 (788) (1)
NMBMF 1689 (13) (-9)
NMFBS 2545 (118) (-50)
PCBL 315 (165) (-1)
PIC 1240 (50) (5)
PICL 836 (150) (8)
PRIN 774 (2063) (0)
PRVU 210 (2415) (0)
PURBL 199 (10) (3)
RADHI 228 (160) (1)
RBCL 12850 (10) (250)
RBCLPO 11800 (80) (270)
RHPC 125 (93) (-3)
SANIMA 350 (580) (2)
SBL 325 (290) (-3)
SCB 811 (1060) (1)
SDESI 1937 (1338) (-2)
SHPC 375 (120) (-1)
SICL 1025 (294) (0)
SKBBL 1272 (945) (-6)
SLBBL 1949 (895) (9)
SLBS 1748 (70) (0)
SMFDB 1169 (160) (44)
SPDL 137 (409) (2)
SRBL 241 (339) (-1)
SWBBL 1395 (150) (-6)
UMHL 192 (14) (0)
VLBS 890 (661) (-9)
WOMI 1590 (1185) (-2)
Home लेख | दृष्टिकोण हल्लाको पछि दगुर्छन् लगानीकर्ता
लेख | दृष्टिकोण0views
हल्लाको पछि दगुर्छन् लगानीकर्ता
डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि शेयरबजार अनुत्पादक क्षेत्र भनेको भन्ने हल्लाका पछि लागेर शेयरबजारका लगानीकर्ताले एकै दिन रू. ४७ अर्ब गुमाएका थिए । शेयरबजारलाई हल्लाले नै तलमाथि पुर्‍याइरहेको हुन्छ । शेयरबजारका कतिपय लगानीकर्ता हल्लाको पछि लाग्ने गर्छन् भन्ने कुरालाई यसले प्रमाणित गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शेयरबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको भनेर बजारमा व्यापक हल्ला चल्यो । उक्त हल्लाले २०७४ सालको भूकम्पले हल्लाउन नसकेको शेयरबजारलाई पनि हल्लाइदियो । शेयरबजारमा पहिरो नै गयो, शेयरबजारका धेरैजसो लगानीकर्ता बगे । अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले शेयरबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भनेको भए पनि नभनेको भए पनि हल्लाको पछि लगानीकर्ता दगुर्न नहुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । यसले कतिपय लगानीकर्ताले सचेत नभएको र विवेक पुर्‍याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ । त्यसो त अर्थमन्त्रीले त्यस्तो नभनेको भनेर स्पष्टीकरण दिए सके । तर, त्यतिबेलासम्ममा लगानीकर्ताले नोक्सानी बेहोरिसकेका थिए । अर्थमन्त्री डा. खतिवडा देशको अर्थतन्त्रको ज्ञाता नै हुन् । नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले शेयरबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भने भनेर पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ । हुन त अर्थमन्त्री खतिवडा गभर्नर हुँदा नै शेयरबजारसम्बन्धी नकारात्मक विचार राख्ने व्यक्ति भनेर भन्ने गरिन्थ्यो । यस कारणले पनि डा. खतिवडा अर्थमन्त्री बन्ने खबरले ओरालो लाग्दै गरेको शेयरबजार झनै ओरालो लागेको हो भन्ने गरिएको छ । बजारमा हल्लाको खेती गरेर आप्mनो दुनो सोझ्याउने व्यक्ति पनि नभएका होइनन्, यसका लागि त लगानीकर्ता नै सचेत हुनुपर्छ । पछिल्लो समय त बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूले निक्षेपमा दिने ब्याजको किचलोले पनि शेयरबजारमा असर पर्ने भइसक्यो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर र राष्ट्रिय योजनाका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका अर्थमन्त्री खतिवडाले शेयरबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भने भनेर पत्याउन पनि गाह्रो हुन्छ ।
त्यसो त २०७१/७२ को मौद्रिक नीतिका कारणले शेयरबजार डामाडोल भएको थियो । मौद्रिक नीतिले बैङ्क तथा वित्त कम्पनीहरूलाई आफ्नो पूँजी लगभग चार गुणाले बढाउनुपर्ने भएकाले कम्पनीहरूले पूँजी बढाउन बोनस शेयर, हकप्रद शेयर जारी गर्ने कुराले नेप्से उचालियो । सबैजसो कम्पनीले २, ३ सय प्रतिशतसम्म हकप्रद शेयर जारी गरे । लगानीकर्तालाई हकप्रद शेयरको भारी बोकाई कम्पनीहरूले आआफ्नो पूँजी वृद्धि गरे । यस कारण शेयरबजारमा शेयरको आपूर्ति बढेर विक्रीचाप बढेकाले शेयरबजार ओरालो लाग्यो । ओरालो लागेको शेयरबजारलाई कहिले राजनीतिकले, कहिले गभर्नरले, कहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको अदूरदर्शी नीतिले, कहिले अर्थमन्त्रीको भनाइको हल्लाले, कहिले वाम गठबन्धनले, कहिले निर्वाचनले, कहिले नचाहिँदा हल्लाले, कहिले बैङ्कहरूको ब्याज दरले, कहिले ठूला लगानीकर्ताको चलखेलले र कहिले लगानीकर्ता डराउनाले र आत्तिना गर्नाले लगानीकर्ताहरूले नोक्सानी बेहोर्नुपरिरहेको छ । त्यसो त शेयरबजार घट्नेका कारण थुप्रै छन् । बैङ्कमा तरलताको कमी, ब्याजदरमा वृद्धि, लगानीकर्ता हकप्रद शेयरको मारमा पर्नु, शेयर धितो कर्जामा कडाइ, आईपीओ एफपीओको निष्कासनले लगानीकर्तासँग शेयरको थुप्रो हुनु आदिआदि ।
शेयरबजारमा ठूलाठूला पहिरो जाने भनेकै राजनीतिक कारणले हो भन्दा फरक नपर्ला । प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनका बेला वाम गठबन्धनका कारण ओरालो लागेको भनिएको शेयरबजार अझै पनि राम्ररी उँभो लाग्न सकेको छैन । शेयरबजारमा ठूलो पहिरो वामपन्थी सरकारको अर्थमन्त्रीले नै ल्याउने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । विगतमा पनि वामपन्थीको नेतृत्वको सरकारको पालामा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले शेयरबजारलाई जुवाको संज्ञा दिएका कारण शेयरबजारमा ठूलै पहिरो गएको थियो । त्यस बेला शेयरबजार लगभग ध्वस्तजस्तै भइसकेको थियो । यसलाई ठाउँमा ल्याउन लगभग ५ वर्ष लाग्यो । त्यस्तै, द्वन्द्वको समयमा पनि शेयरबजार लगभग आर्यघाटको नजीक पुगिसकेको थियो । पछिल्लो समय फेरि राजनीतिक कारणले शेयरबजार ओरालो लाग्यो । डा. भट्टराई, डा. नेपाल र डा. खतिवडाले शेयरबजारमा ठूलो तरङ्ग नै ल्याएका छन् । यस्तो तरङ्ग हल्लाकै कारण मात्र भएको हो । शेयरबजार तलमाथि भइरहन्छ तर पनि अप्रत्याशित रूपमा हुने तलमाथिले लगानीकर्ताहरू मारमा पर्छन् ।
एक जना मन्त्रीले शेयरबजारलाई अनुत्पादक क्षेत्र भन्यो भन्दैमा आफ्नो सम्पत्ति नै सकिनेजस्तो गरी आत्तिने डराउने गरेर हल्लाको पछि लागी वास्तविकता नै नबुझी अघि बढ्ने हो भने त्यस्ता लगानीकर्ता शेयरबजारमा नलागेकै जाती हुन्छ । लगानीकर्ताले शेयरबजारसम्बन्धी वास्तविकता बुझेर र आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर र लगानी गर्न लागेको कम्पनीको अवस्था बुझेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ । हल्लाको पछि नलागी, जोखीम र प्रतिफलको लेखाजोखा र दीर्घकालीन लगानीको योजना बनाएर शेयरमा लगानी गर्दा उत्तम हुन्छ ।
अहिले २ तिहाई बहुमतको सरकार छ । यो स्थायी सरकारले शेयरबजारका लागि कस्तो नीति लिन्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण छ । शेयरबजारका सम्बन्धमा सरकारको आधिकारिक धारणा आउनुपर्छ । अहिले शेयरबजारले अलिकति उचाइको बाटो लिए पनि लगानीकर्ता अझै अन्योलमा छन् । कतिपय लगानीकर्ता त ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामै छन् । शेयरबजारका लगानीकर्ता धैर्य हुनुपर्छ । शेयरबजारले भर्खरैदेखि सकारात्मक बाटो लिएको छ । राम्रो कम्पनीमा दीर्घकालीन योजना बनाई लगानी गर्न डराउनु पर्दैन ।
बाराही हाइड्रोपावरको विशेष साधारण सभा
ग्रीन डेभलपमेण्टको सीईओमा आचार्य नियुक्त
मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक : सबैभन्दा धनी यातायातमन्त्री गरीब महिलामन्त्री
विद्युत् खरीद विक्रीको दर एकरूपता कायम गर्न माग गर्दै रीट
बैङ्कको पर्यवेक्षणमा कडाइ
‘सरकारको मुख्य प्राथमिकता सडक पूर्वाधार हो’
चापाकोटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश